Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Aeroflot ifuna abaqhubi beenqwelo moya ukuba bagonywe
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Ukwaphula iRussia News • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba ezahlukeneyo
Abaqhubi beenqwelomoya abathandathu beAeroflot bayala i-COVID-19 jabs, enqunyanyisiwe ngaphandle kwentlawulo
Abaqhubi beenqwelomoya abathandathu abasebenzela inqwelo moya enkulu yamazwe aphesheya eRashiya baphantsi kwaye banqunyanyiswa emsebenzini phantsi kwemithetho evumela iinkampani ukuba zigxothe ngokufanelekileyo abasebenzi abangafuni ukubhalisela iyeza lokulwa intsholongwane ye-COVID-19.
I-Aeroflot iyabanqumamisa abaqhubi beenqwelo moya ngenxa yokwala i-COVID-19 jabs.
Abaqhubi beenqwelo moya abanqunyanyisiweyo bala ukutyikitya isitofu sokugonya i-coronavirus.
Umbutho wabaqhubi beenqwelomoya ukhalaze kwi-CEO yeAeroflot, esithi ukumiswa kukhetho.
Inqwelo moya yenqwelomoya yaseRussia iAeroflot, uninzi lwayo ngurhulumente waseRussia, yathumela ubuncinci abaqhubi beenqwelo moya abangagonywanga kwikhefu elingahlawulelwayo okanye kwikhefu ngaphandle kwentlawulo, utshilo isithethi somphathi.
Isithethi se Aeroflot Batsho ukuba abaqhubi beenqwelo moya abathandathu babebekwe kwikhefu lokugula, ngaphandle kwentlawulo, kuba bakhethe ukungafumani jab. Nangona kunjalo, inani labaqhubi beenqwelo moya abaxhonyiweyo lincinci xa kuthelekiswa nobungakanani babasebenzi beAeroflot, kunye nabaqhubi beenqwelo moya abangama-2,300 kwii-cockpits zenkampani.
Umbutho wabasebenzi wenqwelomoya ukhalaze kwi-Aeroflot CEO uMikhail Poluboyarinov wocalucalulo, esithi abagadi beenqwelomoya abangagonyelwanga kunye nabasebenzi benkxaso yezobuchwephesha abajonganga nokugxothwa okufanayo.
U-Igor Delduzhov, uMongameli we Sheremetyevo I-Trade Union yabasebenzi beNdiza, esekwe kwisikhululo seenqwelomoya iAeroflot eMoscow, ifikelele kwisigqibo sokususa abasebenzi beenqwelomoya. Ngokutsho kwakhe, impendulo ebukhali kwabo bakhetha ukungagonyi ayifanelekanga, inikwe malunga neepesenti ezingama-84 zabasebenzi ekuthiwa sele begonyiwe.
"Ayikho enye inqwelo moya yaseRussia enokunqunyanyiswa okunje," utshilo uDeldyuzhov kwileta kwiwebhusayithi yomanyano.
ILufthansa ayisamkeli amaLadies kunye ...